Global Voices teny Malagasy » Hoy Ny Minisitry ny Fanabeazana Ao India Hoe ny Ombivavy no Hany Biby Mifoka Sady Mamoaka Oksizena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Febroary 2017 5:38 GMT 1	 · Mpanoratra Kisholoy Mukherjee Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fitantanam-pitondrana, Hehy, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Sakafo, Tantara, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
Toa mahefa ny zavatra rehetra ny ombivavy Indiana, na toa tahaka ny milaza izany ny fanehoan-kevitra farany  nataon'ny Minisitry ny Fampianarana ao amin'ny firenena, Vasudev Devnani. Araka ny heviny, ny ombivavy no hany biby afaka mifoka sy mamoaka ôksizena. Toa nanohy nilaza ihany koa izy fa izay rehetra mandeha eo akaikin'ny ombivavy dia ho sitrana amin'ny aretina tahaka ny sery. Ity fanamarihana mazava fa manafintohina ity no fanampiny farany tamin'ny lisitra lava be momba ny fandalàn'ny antokon'ny fitondrana Bharatiya Janata (BJP) tafahoatra ny ombivavy.
Na izany aza, nilaza ny toe-draharaha ihany koa ny Logical Indian :
Naneho hevitra  i Completeturnaround Mpisera Reddit hoe :
Voampanga ho manampatra ny maha-maro an'isa ny Haindò ny BJP ary lehiben'ny minisitra ao amin'ny fanjakana Gujarat tamin'ny fotoan'androny ny iray amin'ireo mpitarika lehibe indrindra Narendra Modi , (praiminisitry ny firenena ankehitriny) rehefa nipoaka ny rotaka teo amin'ny Haindò sy ny Silamo. Tsy voampanga ho mpamboly rotaka  ihany ny BJP sy ny mpiara-dia akaiky azy, dia ny Rashtriya Swayamsevak Sangh  (RSS), miaraka amin'ny fikambanana mpiara-dia hafa fa voatsikera hatrany izy ireo noho ny tsy fahaizana mandefitra /mahazaka fahasamihafana.
Hatramin'ny naha lasa praiminisitra an'i Modi, taorian'ny fandresen'ny BJP tamin'ny fifidianana taona 2014, niatrika famonoana olona vokatry ny fankahalana maromaro  natao tamin'ny anaran'ny fiarovana ombivavy ny firenena. Maro ny tranga saiky nivadika ho zava-doza hatrany eo amin'ny politikan'ny famonoana omby. Tamin'ny Septambra 2015, nisy lehilahy Silamo maty novonoin'ny mpiambina mpiaro ombivavy tao amin'ny faritanin'i Uttar Pradeshed , noho ny ahiahy fa nihinanana hena omby izy. Tamin'ny volana Jolay 2016, lehilahy sasany avy amin'ny vondrom-piarahamonina Dalit voahilikilika ara-tsosialy no nohitsakitsahina novonoina noho ny fanalàna hoditra ombivavy maty, izay fantatra fa anton'asan'izy ireo nentin-drazana izany. Narahana fihetsiketsehana goavana  nataon'ny Dalits ho fanoherana ny tsy rariny mihatra amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ity zava-nitranga izay voarakitra tanaty lahatsary niparitaka be sy nanafintohina ny feon'ny fieritreretan'ny firenena ity. Notontosaina tao an-tanànan'i Unan fanjakana Gujarat izany fihetsiketsehana izany.
Voatery niaiky  mihitsy ny praiminisitra tenany fa lasa fandrahonana ny fitandremana izaitratra ny ombivavy, hoy izy: “Tena mahatsiaro tezitra aho amin'ny fomba nanokafan'ny olona sasany fivarotana amin'ny anaran'ny fiarovana ombivavy. Nahita aho fa misy ireo olona manao hetsika tsy ara-tsosialy mandritra ny alina, kanefa miseho ho mpiaro ombivavy amin'ny atoandro. “
Raha sokajian'ny maro amin'ny Haindò fa masina ny ombivavy, Indiana hafa maro kosa no mihinana azy ho sakafo, ao anatin'izany ny Haindò sy ny Silamo. Nampangain'ireo laika fa tsy manaja ny fitambaran'ny kolontsaina maro ao India, izay ahitana vondrom-piarahamonina isan-karazany manana finoana ara-pivavahana samihafa, fomba fanao ara-kolontsaina samihafa sy fomba fiaina samihafa ny BJP sy ny tafika mpiara-dia aminy antsoina hoe Hindutva .
Prasad Ravindranath  naneho hevitra tao amin'ny Facebook hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/10/94723/
 fanehoan-kevitra farany: http://www.hindustantimes.com/india-news/cow-only-animal-to-inhale-and-exhale-oxygen-rajasthan-minister/story-a8nPi8XDxpvO8YKwibN5RJ.html
 Bharatiya Janata : https://en.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Janata_Party
 Logical Indian: https://www.facebook.com/logical.indian/posts/1123120111151040?match=b3h5Z2VuLGNvdw%3D%3D
 Naneho hevitra: https://www.reddit.com/r/india/comments/5o8lr1/cow_only_animal_that_inhales_exhales_oxygen/
 mpamboly rotaka: http://www.truthofgujarat.com/topics/2002-gujarat-riots/
 Rashtriya Swayamsevak Sangh: https://en.wikipedia.org/wiki/Rashtriya_Swayamsevak_Sangh
 tsy fahaizana mandefitra: http://www.firstpost.com/india/heres-what-the-intolerance-debate-in-india-in-2015-was-all-about-2561550.html
 famonoana olona vokatry ny fankahalana maromaro: http://www.business-standard.com/article/current-affairs/cow-only-animal-that-inhales-exhales-oxygen-rajasthan-education-minister-117011600484_1.html
 maty novonoin'ny mpiambina mpiaro ombivavy tao amin'ny faritanin'i Uttar Pradeshed: https://globalvoices.org/2015/10/02/mans-beating-death-casts-harsh-light-on-indias-beef-politics/
 nohitsakitsahina novonoina : http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/gujarat-7-of-dalit-family-beaten-up-for-skinning-dead-cow-2910054/
 fihetsiketsehana goavana: http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/dalits-thrashed-for-skinning-cow-two-accused-arrested-as-protests-continue-in-una-2912461/
 Prasad Ravindranath: https://www.facebook.com/prasad.ravindranath/posts/10202606187434071?match=b3h5Z2VuLGNvdw%3D%3D